ရ တ နာ ရွှေ မိုးငွေ မိုးရွာ သွန်းစေ နိုင်သည့်် မ ဟာဝေ ဒ ဗ္ဗမန္တာန်တော်ကြီး – Shwewiki.com
မ ဟာဝေဒဗ္ဗ မန္တာန်တော်ကြီးရွတ်ဖတ်ပူဇော်ရန်
ရွှေမိုးငွေမိုးရွာသွန်းစေနိုင်သည့်် မဟာဝေဒဗ္ဗမန္တာန်တော်ကြီအား စန်းယှဉ်ဓနသိဒ္ဓိနက္ခတ်မွန်းတည့်ချိ်န်တွင်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်နိုင်သကဲသို့ ဓနသိဒ္ဓိနက္ခတ်အပေါ် မွန်းတည့်မျဉ်းဖြတ်ချိန်တွင် ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါက​ကောင်းကျိုးချမ်းသာအကျိုးစီးပွားများလျှင်မြန်စွာရရှိနိုင်မည်ဖြစ်လေသည်(မည်သည့်အချိ်န်မဆိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါကလည်းကုသိုလ်အကျိုးရရှိမည်သာဖြစ်လေသည်)။
ဇေယျတုသက္ကရာဇ်​ ၁၃၈၁ ခုနှစ်​ တပို့တွဲလဆန်း ၂ ရက်​ 26.1.2020 တနင်္ဂ​နွေ​နေ့ မွန်းတည့််​ ၁၂း၄၈ မှ ၁း၄၂ အတွင်း ရွတ်​ဖတ်​ပူ​ဇော်​နိုင်​ပါသည်​။
ဇေယျတုသက္ကရာဇ်​ ၁၃၈၁ခုနှစ် ပြာသိုလပြည့်​​ကျော်​ ၁ ရက်​10.1.2020 ​သောကြာ​နေ့ မွန်းလွဲ ၂း၀၇း၁၅ မှ ၂း၅၈း၅၃အတွင်းရွတ်​ဖတ်​ပူ​ဇော်​နိုင်​ပါသည်​။
ဇေယျတုသက္ကရာဇ်​ ၁၃၈၁ခုနှစ်​ ပြာသိုလပြည့်​​ကျော်​၂ ရက်​ 11.1.2020 စ​နေ​နေ့ မွန်းလွဲ ၂း၀၃း၁၉ မှ ၂း၅၄း၅၇ အတွင်း ရွတ်​ဖတ်​ပူ​ဇော်​နိုင်​ပါသည်​။
ဇေယျတုသက္ကရာဇ်​ ၁၃၈၁ခုနှစ်​ ပြာသိုလပြည့်​​ကျော်​ ၃ ရက် 12.1.2020 တနင်္ဂ​နွေ​နေ့ မွန်းလွဲ ၁း၅၉း၂၃ မှ ၂း၅၁း၀၁ အတွင်း ရွတ်​ဖတ်​ပူ​ဇော်​နိုင်​ပါသည်​။
ဇေယျတုသက္ကရာဇ်​ ၁၃၈၁ခုနှစ်​ ပြာသိုလပြည့်​​ကျော်​ ၄ ရက်​ 13.1.2020 တနင်္လာ​နေ့ မွန်းလွဲ ၁း၅၅း၂၈ မှ ၂း၄၇း၀၅ အတွင်းရွတ်​ဖတ်​ပူ​ဇော်​နိုင်​ပါသည်​။
ဇေယျတုသက္ကရာဇ်​ ၁၃၈၁ခုနှစ်​ ပြာသိုလပြည့်​​ကျော်​ ၅ ရက်​ 14.1.2020.အင်္ဂါ​နေ့ မွန်းလွဲ ၁း၅၁း၃၂ မှ ၂း၄၃း၁၀ အတွင်း ရွတ်​ဖတ်​ပူ​ဇော်​နိုင်​ပါသည်​။
ဇေယျတုသက္ကရာဇ်​ ၁၃၈၁ခုနှစ်​ ပြာသိုလပြည့်​​ကျော်​ ၆ ရက်​ 15.1.2020 ဗုဒ္ဓဟူး​နေ့မွန်းလွဲ ၁း၄၇း၃၆ မှ ၂း၃၉း၁၄အတွင်း ရွတ်​ဖတ်​ပူ​ဇော်​နိုင်​ပါသည်​။
ဇေယျတုသက္ကရာဇ်​ ၁၃၈၁ခုနှစ်​ ပြာသိုလပြည့်​​ကျော်​ ၇ ရက် 16.1.2020.ကြာသာပ​တေး​နေ့ မွန်းလွဲ ၁း၁၄၄၃း၄၀ မှ ၂း၃၅း၁၈ အတွင်း ရွတ်​ဖတ်​ပူ​ဇော်​နိင်​ပါသည်​။
ဇေယျတုသက္ကရာဇ်​ ၁၃၈၁ခုနှစ်​ ပြာသိုလပြည့်​​ကျော်​၈ ရက်​17.1.2020. ​သောကြာ​နေ့ မွန်းလွဲ ၂း၃၉း၄၄ မှ ၂း၃၁း၂၂ အတွင်း ရွတ်​ဖတ်​ပူ​ဇော်​နိုင်​ပါသည်​။
ဇေယျတုသက္ကရာဇ်​ ၁၃၈၁ခုနှစ်​ ပြာသိုလပြည့်​​ကျော်​ ၉ ရက် 18.1.2020 စ​နေ​နေ့ မွန်းလွဲ ၁း၃၅း၄၈ မှ ၂း၂၇း၂၆ အတွင်း ရွတ်​ဖတ်​ပူ​ဇော်​နိုင်​ပါသည်​။
ဇေယျတုသက္ကရာဇ်​ ၁၃၈၁ခုနှစ်​ ပြာသိုလပြည့်​​ကျော်​ ၁၀ရက်​19.1.2020 တနင်္ဂ​နွေ​နေ့ မွန်းလွဲ ၁း၃၁း၅၂ မှ ၂း၂၃း၃၀ အတွင်းရွတ်​ဖတ်​ပူ​ဇော်​နိုင်​ပါသည်​။
ဇေယျတုသက္ကရာဇ်​ ၁၃၈၁ခုနှစ်ပြာသိုလပြည့်​​ကျော်​ ၁၁ ရက်​ 20.1.2020 တနင်္လာ​နေ့ မွန်းလွဲ ၁း၂၇း၅၀ မှ ၂း၁၉း၃၄ အတွင်း ရွတ်​ဖတ်​ပူ​ဇော်​နိုင်​ပါသည်​။
ဇေယျတုသက္ကရာဇ်​ ၁၃၈၁ခုနှစ် ပြာသိုလပြည့်​​ကျော်​ ၁၂ ရက်​ 21.1.2020 အင်္ဂါ​နေ့ မွန်းလွဲ ၁း၂၄း၀၀ မှ ၂း၁၅း၃၈ အတွင်းရွတ်​ဖတ်​ပူ​ဇော်​နိုင်​ပါသည်​။
ဇေယျတုသက္ကရာဇ်​ ၁၃၈၁ခုနှစ် ပြာသိုလပြည့်​​ကျော်​ ၁၃ ရက်​ 22.1.2020. ဗုဒ္ဓဟူး​နေ့ မွန်းလွဲ ၁း၂၀း၀၄ မှ ၂း၁၁း၄၂ အတွင်း ရွတ်​ဖတ်​ပူ​ဇော်​နိုင်​ပါသည်​။
ဇေယျတုသက္ကရာဇ်​ ၁၃၈၁ခုနှစ်​ ပြာသိုလပြည့်​​ကျော်​ ၁၄ ရက်​ 23.1.2020 ကြာသာပ​တေး​နေ့ မွန်းလွဲ ၁း၁၆း၀၉ မှ ၂း၀၇း၄၆ အတွင်း ရွတ်​ဖတ်​ပူ​ဇော်​နိုင်​ပါသည်​။
ဇေယျတုသက္ကရာဇ်​ ၁၃၈၁ခုနှစ် ပြာသိုလပြည့်​​ကျော်​ ၁၅ ရက်​ 24.1.2020 ​သောကြာ​နေ့မွန်းလွဲ ၁း၁၂း၁၃ မှ ၂း၀၃း၅၂ အတွင်း ရွတ်​ဖတ်​ပူ​ဇော်​နိုင်​ပါသည်​။
ဇေယျတုသက္ကရာဇ်​ ၁၃၈၁ခုနှစ်​ တပိုိ့တွဲလဆန်း ၁ ရက်​ 25.1.2020 စ​နေ​နေ့မွန်းလွဲ ၁း၀၈း၁၇ မှ ၁း၅၉း၅၅ အတွင်းရွတ်​ဖတ်​ပူ​ဇော်​နိုင်ပါသည်​။ (တရုတ်​နှစ်​သစ်​ကူး​နေ့)
ဇေယျတုသက္ကရာဇ်​ ၁၃၈၁ ခုနှစ်​ တပို့တွဲလဆန်း ၂ ရက်​ 26.1.2020 တနင်္ဂ​နွေ​နေ့ မွန်းတည့်​ ၁၂း၄၈ မှ ၁း၄၂ အတွင်း ရွတ်​ဖတ်​ပူ​ဇော်​နိုင်​ပါသည်​။ (စန်းယှဉ်​ ဓနသိဒ္ဓနက္ခတ်​မွန်းတည့်​ချိန်​)
ဇေယျတုသက္ကရာဇ်​ ၁၃၈၁ခုနှစ်​ တပိုိ့တွဲလဆန်း ၃ရက်​ 27.1.2020 တနင်္လာ​နေ့ မွန်းလွဲ ၁း၀၀း၂၅ မှ ၁း၅၂း၀၃ အတွင်း ရွတ်​ဖတ်​ပူ​ဇော်​နိုင်​ပါသည်​။
ဇေယျတုသက္ကရာဇ်​ ၁၃၈၁ခုနှစ်​ တပို့တွဲလဆန်း ၄ ရက်​ 28.1.2020 အင်္ဂါ​နေ့ မွန်းတည့််​ ၁၂း၅၆း၂၉ မှ ၁း၄၈း၀၇ အတွင်း ရွတ်​ဖတ်​ပူ​ဇော်​နိုင်​ပါသည်​။
ဇေယျတုသက္ကရာဇ်​ ၁၃၈၁ခုနှစ် တပိုိ့တွဲလဆန်း ၅ ရက်​ 29.1.2020.​ဗုဒ္ဓဟူး​နေ့ မွန်းတည့််​ ၁၂း၅၂း၃၃ မှ ၁း၄၄း၀၁ အတွင်းယရွတ်​ဖတ်​ပူ​ဇော်​နိုင်​ပါသည်​။
ဇေယျတုသက္ကရာဇ်​ ၁၃၈၁ခုနှစ် တပို့တွဲလဆန်း ၆ ရက်​ 30.1.2020 ကြာသာပ​တေး​နေ့ မွန်းတည့်​ ၁၂း၄၈း၄၁ မှ ၁း၃၆း၁၉ အတွင်း ရွတ်​ဖတ်​ပူ​ဇော်​နိုင်​ပါသည်​။
ဇေယျတုသက္ကရာဇ်​ ၁၃၈၁ခုနှစ်​ တပို့တွဲလဆန်း ၇ ရက်​ 31.1.2020 ​သောကြာ​နေ့ မွန်းတည့်​ ၁၂း၄၄း၄၁ မှ ၁း၃၆း၁၉ အတွင်းရွတ်​ဖတ်​ပူ​ဇော်​နိုင်​ပါသည်​။
ဇေယျတုသက္ကရာဇ်​ ၁၃၈၁ခုနှစ်​ တပို့တွဲလဆန်း ၈ ရက်​ 1.2.2020 စ​နေ​နေ့ မွန်းတည့်​ ၁၂း၄၀း၄၅ မှ ၁း၂၃း၂၃ အတွင်း ရွတ်​ဖတ်​ပူ​ဇော်​နိုင်​ပါသည်​။
ဇေယျတုသက္ကရာဇ်​ ၁၃၈၁ခုနှစ်​ တပို့တွဲလဆန်း ၉ ရက်​ 2.2.2020 တနင်္ဂ​နွေ​နေ့ မွန်းတည့်​ ၁၂း၃၆း၅၀ မှ ၁း၃၂း၂၃ အတွင်း ရွတ်​ဖတ်​ပူ​ဇော်​နိုင်​ပါသည်​။
ဇေယျတုသက္ကရာဇ်​ ၁၃၈၁ခုနှစ်​တပို့တွဲလဆန်း ၁၀ ရက်​3.2.2020 တန္လင်္ာ​နေ့ မွန်းတည့်​၁၂း၃၂း၅၄ မှ ၁း၂၄း၃၂ အတွင်း ရွတ်​ဖတ်​ပူ​ဇော်​နိုင်​ပါသည်​။
၂၀၂၀. ၂ လပိုင်းအတွင်း ရွတ်​ဖတ်​ပူ​ဇော်​လိုသူများအတွက်​ ​ပြော​ပေးမည်​။(( ကောင်းကျိုးလိုရာပြည့်ပါစေ))
ရတနာမိုး ရွာသွန်းစေသော မဟာဝေဒဗ္ဗမန္တာန် တော်ကြီး။ငါးရာငါးဆယ် ဇတ်တော်လာ ဝေဒဗ္ဗဇာတ်တော်။မြတ်စွာဘုရား၊ဘုရားလောင်းဘဝကဖြစ်သည်။ဝေဒဗ္ဗမန္တာန်ကို တတ်ကျွမ်းသော ပုဏ္ဏားတယောက်ထံ၌ ပညာသင်ယူလေ၏။
ဆရာပုဏ္ဏားသည် ဓနသိဒ္ဓိနက္ခတ်မွန်းတည့်ချိန်၌ ကောင်းကင်ကိုကြည့်၍ ဝေဒဗ္ဗမန္တာန်ကို ရွတ်လျှင် ရတနာမိုးရွာသွန်းလေ၏။တနေ့သောအခါ အမှု့ကိစ္စရှိသဖြင့် ခရီးသွားသောအခါ လမ်းခရီးတွင် ခိုးသားဓားမြ တို့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရလေသည်။ဆရာကိုဖမ်း
ဆီးထားပြီး တပည့်ဖြစ်သူကို ဆရာအားရွေးနှုတ်ယူရန် ဥစ္စာပြန်ယူခိုင်းလေသည်။ဘုရားလောင်းသည်ပုဏ္ဏား ယနေ့ဓနသိဒ္ဓိနက္ခတ်စန်းယှဉ်၍ မွန်းတည့်လိမ့်မည် မန္တာန်အစွမ်းဖြင့် ရတနာမိုး မရွာပါစေနှင့်ဟု ဆရာ
ကိုမှာကြား၍ ဆရာကိုရွေးရန် ဥစ္စာ ပြန်သွားယူလေသည်။ခိုးသူတို့လက်ထဲဆင်းရဲဒဏ် မခံလိုသော ဆရာသည် မန္တာန်ကိုရွတ် ရတနာမိုးရွာစေပြီး ခိုးသူတို့ကိုပေးကာလွတ်မြောက်ခဲ့လေသည်။
ထို ခိုးသားဓားမြတို့ကို အခြားသောခိုးသား ဓားမြတို့က ဖမ်းဆီးလုယက်ပြန်လေသည် အဖမ်းခံရသောခိုးသားတို့က ဥစ္စာလိုလျှင်ကိုဖမ်းပါဟု လက်ထောက်ခြလေသည်။ပုဏ္ဏားလည်း ဒုတိယအကြိ်မ် အဖမ်းခံရပြန်လေသည်။
ခိုးသားဓားမြများက ရတနာမိုးရွာရန် ခိုင်းစေသောအခါ ဓနသိဒ္ဓိနက္ခတ်မွန်းတည့်ရန် တလလိုသေး၍ တလစောင့်ခိုင်းရာ ခိုးသားဓားမြများကလ်ိမ်လည်သည် အစွမ်းမပြကောင်းလား ဆိုကာအမျက်ထွက်၍ ဆရာ ပုဏ္ဏားကို သတ်ပြစ်လိုက်ကြလေသည်။
ခိုးသားဓားမြ အုပ်စု အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြပြန်ရာနှစ်ယောက်သာကျန်လေ၏တယောက်ကဥစ္စာကိုစောင့်နေခဲ့ပြီး ကျန်တယောက် ကစားသောက်ရန်အလို့ငှာ ရွာနီးချုပ်စပ်သို့ အစားအစာ အရှာဖွေ သွားလေသည်။
အစားအစာယူ၍ပြန်လာသူကို ဥစ္စာစောင့်ရန် ကျန်နေသူကလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ပြီး ဥစ္စာပစ္စည်းများကို အပိုင်ကြံလိုက်ပြီး အသင့်ရှိနေသော အစားအစာကိုစားသောက်ပြီးသောအခါ သေဆုးံလေသည်။အစာရှာသွားသူကအစာထဲအဆိပ်ခတ်ထားခြင်းဖြစ်လေသည်။
နှစ်ဦးစလုးံသေပြီး ပိုင်ရှင်မဲ့ဥစ္စာတို့သာ ကျန်နေခဲ့ လေတော့သည်။ဆရာကိုရွေးရန် ဥစ္စာပြန်ယူသောဘုရားလောင်းသည် ပိုင်ရှင်မဲ့နေသော အစာထဲခတ်ထားသောအဆိပ်သင့်ကာဥစ္စာ ပစ္စည်းများကို တဦးတည်းရရှိလေသည်။ ဇာတ်တော်လာဝေဒဗ္ဗမန္တာန်တော်ကြီးမှာ မည်သည့်မန္တာန်မှန်းမသိရှိရပေ။
သီလသမာဓိ ပြည့်စုံတော်မူသော ဆရာတော်ကြီးများမှ(အာရုံဖြင့်ရှာဖွေ ဖော်ထုပ်ရေးသားပူဇော်သည်ဟု မှတ်သားရဘူးသည်)​​​ရတနာသုးံပါး၏ဂုဏ်တော်များကိုပူဇော်ကန်တော့သစ္စာပြုဂါထာတော်များပင်ဖြစ်​လေသည်။
တချို့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်များမှ ရသေ့ကြီး ဦးခန္တီမှ မဟာ ဝေဒဗ္ဗ မန္တာန်တော်ကြီးကို ဖော်ထုပ်ပေးသနားခဲ့သည်ဟု လည်းဆို​လသည်။မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ရတနာသုးပါး၏ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်တို့ကို
ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ရသည်ဖြစ်ရာလောကီလောကုတ်နှစ်ဖြာသောအကျိုုးတရားများဖြစ်​ထွန်းေ​စရန်​ ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြည့်ပါဟုတိုက်​တွန်းလိုက်​ရ​ပေသည်​။လက်ေ​တွ့အကျိုးထူးများ ကိုယ်တိုင်သိရှိရပါလိမ့်မည်​။